Imeri Obodo Jeriko Eweghị Oge
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Olee ihe ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie chọpụtara nke gosiri na imeri Jeriko eweghị oge?
Jọshụa 6:10-15, 20 kwuru na ndị agha Izrel gara Jeriko gburugburu otu ugboro n’ụbọchị ruo ụbọchị isii. N’ụbọchị nke asaa, ha gara ya gburugburu ugboro asaa. Mgbe ahụ ka Chineke mere ka mgbidi Jeriko a rụsiri ike daa, ụmụ Izrel abanye Jeriko, merie ya. È nweela ihe ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie chọtarala nke gosiri na imeri Jeriko eweghị oge otú ahụ Baịbụl kwuru?
N’oge ochie, ọ na-abụ ndị agha bịa ịlụso obodo ọ bụla agha, ha eburu ụzọ nọchibido ya. Ọ bụrụ na ha anọchibido ya ruo ogologo oge, ndị obodo ahụ ga na-eri nri ndị ha chekwara. Ndị agha ahụ mechaa merie obodo ahụ, ha na-akwakọrọ ihe ọ bụla ha hụrụ, ma nri ndị fọrọnụ. N’ihi ya, ihe ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie na-ahụ n’obodo ndị e si otú ahụ bibie na Palestaịn bụ naanị obere nri. Mgbe ụfọdụ, ha anaghịdị ahụ nke ọ bụla. Ma, ihe ha hụrụ na Jeriko oge ochie adịghị otú ahụ. Otu akwụkwọ nke kwuru banyere ihe ndị mgbe ochie sịrị: “E wezụga ite ájá, ihe a kacha hụ ebe ahụ bụ ọka.” O kwukwara na a naghị ahụkarị nri há otú ahụ n’ebe ndị ọzọ.
Baịbụl kwuru ihe mere ndị Izrel ebukọrọghị nri ndị Jeriko. Jehova gwara ha ka ha ghara iwere ihe ọ bụla. (Jọsh. 6:17, 18) Baịbụl kwukwara na mgbe ndị Izrel gara ịlụso Jeriko agha, ọ dịbeghị anya e wechara ihe ubi. N’ihi ya, ọka ha nwere ka buru ibu. (Jọsh. 3:15-17; 5:10) Ọka buru ibu a hụrụ na Jeriko gosiri na ndị Izrel anọchibidoghị Jeriko ruo ogologo oge, otú ahụ Baịbụl kwuru.
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Nọvemba 2015